विश्वभरका नेपालीहरु भन्छन् यी काँग्रेस नेताहरु लाेकप्रीय थिए तर किन चुनाब हारे त ? | suryakhabar.com
Home राजनीति विश्वभरका नेपालीहरु भन्छन् यी काँग्रेस नेताहरु लाेकप्रीय थिए तर किन चुनाब हारे त ?
विश्वभरका नेपालीहरु भन्छन् यी काँग्रेस नेताहरु लाेकप्रीय थिए तर किन चुनाब हारे त ?
on: २६ मंसिर २०७४, मंगलवार १७:११ In: राजनीतिTags: विश्वभरका नेपालीहरु भन्छन् यी काँग्रेस नेताहरु लाेकप्रीय थिए तर किन चुनाब हारे त ?No Comments
काठमाण्डौ । गत मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिसभा निर्वाचनमा मुलुककै सबैभन्दा पूरानो र मास पार्टीको रुपमा नेपाली कांग्रेसले नराम्रो धक्का लागेको छ । समग्र कांग्रेस पार्टीलाई धक्का लागेको त थियो नै त्यतिमात्र नभई पार्टीभित्रका अनिवार्य जित्नुपर्ने केही युवा र स्थापित पूराना नेताहरुले पनि हारको पीडा सहनु परेको छ । देश र जनताको लागि इमान्दारितापूर्वक जीवन समर्पण गरेका उनीहरुले देशैभर जित हासिल गरेको वाम गठबन्धनसँग हार्नु स्वभाविक जस्तो देखिएपनि नैतिक राजनीतिक संस्कारले हार्नुमा निकै पीडा भएको ती नेताहरुलाई मत हाल्ने स्थानीय जनताको गुनासो सुनिन्छ ।
विश्वभर बस्ने नेपालीहरुले केही काँग्रेस नेताहरुलाई मुलुकलाई चाहिने भनेर उपमा दिईरहेका भएपनि भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्बाचनमा उनीहरुले चुनाव हारेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा.शेखर कोइराला मोरङमा सबैभन्दा लोकप्रिय नेताको छबि बनाएका कांग्रेस लिडर हुन् तर उनले यो पटकको निर्वाचनमा हारेका छन् । जनताले राम्रो मत दिएपनि वाम गठबन्धन र मधेसी दलहरुलाई मत विभाजन हुँदा उनले हार ब्यहोर्नुपरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मोरङ आफैमा लामो समय नेपाली कांग्रेसको प्रभावमा रहेको जिल्ला हो । जहाँबाट कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले सो पार्टीको राजनीतिक अभियानको सुरुवात गरेका थिए । कोइराला परिवारको विरासतमा अडिग मोरङमा भने यो पटकको चुनावमा डा.मिनेन्द्र रिजालले त्यो विरासत थामिदिएका छन् । लोकप्रिय र स्थापित नेता डा.कोइरालाले भने हार ब्यहोर्नुपरेको छ । नेता कोइरालाको हारले कांग्रेसको एउटा इमान्दार र कुशल कमाण्डरले संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट बञ्चित हुनुपरेको विराटनगरका स्थानीय कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको हारले पनि संसदीय अभ्यासमा पोख्त पार्टी कांग्रेसलाई निकै ठूलो ठेस लागेको छ । निकै लामो समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खर्चिएका नेता पौडेल कांग्रेसभित्रका एक धैर्यवान र त्यागी नेताका रुपमा स्थापित थिए । उनको हारले संसदमा कांग्रेसको प्रभावशाली नेताको अभाव खड्किएको अनुभव भएको एक कांग्रेस नेताले बताए । तनहुँबाट चुनाव हारेका पौडेल कांग्रेसको पार्टी सभापति हुने लाइनका नेतामा पर्छन् । यद्यपि, पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षका कारणले उनी त्यो अवसरबाट बञ्चित छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङले चुनाव लड्ने इच्छा देखाए पनि पार्टीले टिकट नदिँदा उनले चुनावनै लड्न पाएनन् । कास्कीका नेता गुरुङले नेपाली कांग्रेसभित्र मौलाउँदै आएको भ्रष्टीकरण प्रवृत्ति र नेताहरुको अराजक राजनीतिक व्यवहारका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका थिए । उनलाई अधिकांश इमान्दार कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले मन पराउने गर्छन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक अभियानलाई शुद्धीकरणको बाटोमा लगिए मात्र पार्टी बन्न सक्ने दाबी गर्दै आएका नेता गुरुङले चुनाव लड्ने अवसरनै नपाउनु बिडम्बना भएको सो पार्टीका कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । त्यस्तै, सो पार्टीका युवानेता गुरुराज घिमिरेले पनि चुनावका लागि टिकट पाएनन् । पार्टीभित्र इमान्दार र त्यागी नेताका रुपमा देखिएका घिमिरेले टिकट पाएको भए चुनाव जित्न सक्ने धेरैको तर्क छ । अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताहरुका अनुसार चुनाव जित्न सक्ने क्षमताका नेताहरुले टिकट नपाउनु र आफ्नो खल्तीका नेताहरुले टिकट पाउनुले पनि चुनावी परिणाममा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
त्यस्तै,नेपाली कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली र बौद्धिक नेताका रुपमा स्थापित नेता हुन् महेश आचार्य । उनले पनि यो पटकको चुनाव हारेका छन् । मोरङ–४ बाट चुनाव लडेका आचार्यको हारले संसदमा बौद्धिक र राजनीतिक नेताको अभाव खड्किएको बताइन्छ । आचार्य नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक र सैद्धान्तिक नेताका रुपमा स्थापित छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसका अर्का इमान्दार युवा नेता हुन् प्रदिप पौडेल । जसले तनहुँबाट प्रदेशसभाका लागि चुनााव लडेका थिए । उनले पाँच भोटको अन्तरले चुनाव हार्न पुगे । पाँच भोटको अन्तरमा चुनाव हार्नु भनेको विजय हुनु सरहको मतपरिणाम हो, तर अंकगणितमा एक अंकले पनि फरक पार्ने भएकोले प्रदिपले चुनाव हारे । तर यो मतपरिणामलाई हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छकि वामहरु एक हुँदा पनि उनले निकै लोकप्रिय मत ल्याएका छन् । यो उनको बौद्धिकता, इमान्दारिता र जनतासँगको लोकप्रियताको परिणाम हो । जसको हारले कांग्रेसलाई ठुलो क्षति भएको छ । पौडेलजस्ता युवा नेताहरु प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा नहुँदा कांग्रेसलाई घाटा लाग्ने निश्चित छ ।
त्यस्तै,कांग्रेसका नविन्द्रराज जोशी, रामहरि खतिवडा, लोकेश ढकाल लगायतका युवा र इमान्दार नेताहरुले चुनाव हारेका छन् । जोशी काठमाण्डौ–८, खतिवडा ओखलढुंगा र ढकालले काठमाण्डौ–२ को प्रदेशसभाबाट चुनाव लडेका थिए । यी नेताहरु पनि कांग्रेसको युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न संसदमा हुनैपर्ने अधिकांश कांग्रेस नेता–कायकर्ताहरुको भनाई छ, जसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि भूमिका मात्र खेल्दैनन्,नेपाली कांग्रेस पार्टीकै पुनःसंरचनामा विशेष महत्व राख्छन् ।
विपक्षीले पनि प्रसंशा गर्ने नेता शर्मा !
त्यस्तै,झापा १ बाट कांग्रेसका बौद्धिक युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले चुनाव हारेका छन् । उनलाई माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुरेन्द्र कार्की (राम)ले हराए तर चुनावी हारकै बीचमा यी दुई प्रतिस्पर्धी नेताहरुबीचमा निकै रोमाञ्चक सम्बन्ध देखियो । यी दुवै नेताहरुले एक अर्काको इमान्दारिता र बौद्धिकताबारे तारिफ गरेका थिए र सृजनात्मक प्रतिस्पर्धामा जोड दिएका थिए । वास्तमा यो पटकको चुनावमा कांग्रेस नेता शर्मा र माओवादी नेता कार्कीले एउटा उदारहणनै प्रस्तुत गरेका थिए । यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भने कांग्रेस नेता भएर पनि विपक्षीहरुसँग समेत निकै लोकप्रिय छबि बनाएका नेता हुन् विश्वप्रकाश शर्मा । जसले चुनाव हार्दा कांग्रेसलाई ठूलै धक्का लागेको छ ।
नेतृहरुको हारबाट भएको घाटा !
कांग्रेसका अधिकांश महिला नेतृहरुले चुनाव हारेका छन् । कांग्रेस नेतृ एवम् प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु देउवाले कैलालीबाट चुनाव हारेकी छन् भने बागलुङबाट अर्की नेतृ चम्पादेवी खड्काले चुनाव हारेकी छन् । त्यस्तै नेतृ सरस्वती बजिमयले खोटाङबाट चुनावमा पराजय बेहोरेकी छन् । उता, कांग्रेसभित्र लोकप्रिय छबि बनाएकी डिना उपाध्यायले पनि चुनाव हारेकी छन् । उनले मकवानपुरबाट चुनाव हारेकी हुन् । त्यस्तै सीतादेवी यादवले पनि चुनाव हारेकी छन् । मधेसबाट उठेकी नेतृ यादव कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष समेत हुन् । यता,तेह«थुमबाट सीता गुरुङले पनि चुनाव हारेकी छन् ।
डा.आरजु राणाले किन पनि चुनाव जित्नुपथ्र्यो भने उनमा राजनीतिका अतिरिक्त सामाजिक मुद्धाका एजेण्डाहरु संसदमा उठाउने खुबी प्रसस्त थियो । विद्वान छबि भएकी राणा प्रधानमन्त्री पत्नीका रुपमा भन्दा पनि सामाजिक अभियन्ताका रुपमा बढी स्थापित छन् । कांग्रेसभित्र सीतादेवी यादव, सरस्वती बजिमय, चम्पादेवी खड्का, सीता गुरुङ लगायतका महिला नेतृहरुको योगदान पनि कम छैन, जो संसदमा पुगेर नयाँ संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा साथ दिनबाट बञ्चित रहे । यसले कांग्रेसलाई निकै घाटा हुने देखिएको छ ।
Tags: विश्वभरका नेपालीहरु भन्छन् यी काँग्रेस नेताहरु लाेकप्रीय थिए तर किन चुनाब हारे त ?
काँग्रेसद्वारा प्रदीप पौडेलको क्षेत्रमा मतगणना धाँधली भएको ठहर्दै पुन: मतदानको माग
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार १७:११